Ngingakwazi yini ukugeza emva kombhede wokuthunga?
I-solarium njengezinhlobo zezinsizakalo zokuzithokozisa yavela maduzane. Naphezu kwalokhu, uthanda ukuthandwa kakhulu, ikakhulukazi phakathi kwesigamu esihle. Amantombazane angakwazi ukunikeza isikhumba isikhumba esincane esizokwenza kube isikhumba esisha futhi esincane. Kulesi simo, kuneminye imithetho okufanele ilandelwe ukuze inqubo ingabi yingozi. Abaningi bayazibuza ukuthi ungakwazi yini ukugeza emva kwe-salon yokuqothula noma udinga ukusebenzisa ama-lotions akhethekile? Konke lokhu kuthinta izinga le-tan.
Ngingazigeza yini ku-solarium?
Ngaphambi kokuba ungene ngqo emgodini, ukugeza akukhuthazwa. Ikakhulukazi uma umuntu esebenzisa ama-gel eshaweni esekelwe kuma-alkali noma ama-scrubs. Wonke lawa mathuluzi asusa ingqimba yokuzivikela yesikhumba, okwenza kube lula kakhulu emvelweni - ikakhulukazi emisebeni ye-ultraviolet. Lokhu kwandisa amathuba okushiswa . Ngakho-ke, emva kwenqubo yokuhlanza yomzimba kufanele ithathe okungenani amahora amathathu.
Kumele futhi kukhunjulwe ukuthi ngaphambi kokuya ku-solarium udinga ukuhlanza isikhumba sanoma iziphi izimonyo, kufaka phakathi ukhilimu wasekuseni ne-deodorant. Konke lokhu kuthathelwa ithuluzi elikhethekile lenqubo yesikhathi esizayo. Sebenzisa ukuhlunga kuhle kakhulu ngosuku ngaphambi kokugeza ibanga. Lokhu kuzosusa ingqimba ekhudlwana yesikhumba.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukuqhuma kwenzeka ezinsukwini ezimbili ngaphambi kwenqubo. Futhi, ngoba isikhumba sakhe sithukuthele futhi sizwela.
Ungakwazi ukugeza isikhathi esingakanani emva kombhede wokuqothula?
Konke kuxhomeke kunhlobo lesikhumba, amandla, izinhlobonhlobo zenqubo kanye nezimonyo ezihambisanayo. Isibonelo, emva kokuvakashela amadivaysi angemuva, ukwamukelwa kweshawulwa kunconywa, ngoba ukungena kwamandla angeke kwenziwe ngendlela efanele. Lokhu kufanele kwenziwe kuphela ihora kanye nengxenye ngemva kokuphela kokwelapha - kubalulekile ukulinda kuze kube khona i-epidermis iyancipha.
Kubalulekile ukulandelela izinga lokushisa kwamanzi. Ngaphansi kokushisa okushisayo kunqatshelwe - kufanele kufudumele kuphela, ngakho kungaba kuhle ukuba ngaphansi kwalo. Uma sicabangela lo mbuzo: Ngingakwazi yini ukugeza ngilawa eshaweni ngemva kokususa i-salon, khona-ke impendulo izobonakala - yebo, kodwa emva kwesikhathi. Lokhu kudingekile kuphela ukugeza ukukhukhumeza namafutha, okuzogcina ama pores evuliwe. Ngale ndlela, ungagwema izinkinga zesikhumba ezingadingeki.
Kunconywa ukusebenzisa ama-gel athambile anomphumela wokuqeda. Ngokuvamile, ekubunjweni kwalokhu ungathola ukukhishwa kweminti, i-menthol noma i-chamomile. Ngemva kokugeza, udinga ukusebenzisa izimonyo ezikhethekile ngendlela yamafutha noma ubisi, okudayiswa ekhemisi ngalinye.
Ngaki ukuthi kungakanani ukukwazi ukugeza emva kwelanga lokubeka ilanga?
Uma ngesikhatsi kusetshenzwa kuphela ama-moisturizers noma ukusikelwa kwelanga, ungathatha ishadi ngemva kwamahora amabili noma amathathu. Uma okuthiwa i-bronzers ephakamisa umbala isetshenzisiwe, kutuswa ukuba ugeze emva kwamahora amane.
Kungakhathaliseki ukuthi kungenzeka yini ukugeza emva kokuvakashela i-sunkck ngekhilimu kuyingozi?
Ukuhamba ngezinyawo ngemva kokushisa kwe-salon nokusebenzisa isikhathi kuphephile - akulimazi. Kulesi simo, kubalulekile ukukhumbula ukuthi isikhumba sekuyisikhathi esithile sidalulwe emisebeni ye-ultraviolet. Ngakho-ke, ungasebenzisi ama-scourts, ama-scrubs, ama-gel kanye neminye imikhiqizo. Okuhle kuyindlela yokuthatha ishazi ngaphansi kwamanzi asebenzayo, usebenzisa i-ayisi-gel. Ngemuva kwalokho, isikhumba sivinjelwe ngethawula futhi siswakanyiswe ubisi olukhethekile.
Kumele futhi kukhunjulwe ukuthi akusizi ngalutho ukubandakanya ezemidlalo ezisebenzayo emahoreni angu-24 alandelayo, njengalolu cala i-kosh iqala ukuhudula, engayithinta kabi esikhathini esizayo. Kungcono ukuhlehlisa ukuqeqeshwa usuku oluzayo.
Kungani izikhonkwane ziqhekekile?
Indlela yokukhulisa izipikili eside?
Izigaba ze cellulite - kanjani ukuqaphela nokuphatha zonke izigaba zokuthuthukiswa "kwe-orange crust"?
Ungasusa kanjani amamaki esondlo esifubeni?
Izipikili ezingenalutho - izindlela eziphumelela kakhulu zokwelapha
Kanjani ngokushesha ukwelapha ngamathumba ekhaya?
Ubuso begesi-uketshezi obuketshezi - kuyini?
Izinduna ezinamandla emzimbeni - izimbangela kanye nokwelashwa
Imibono emihle futhi elula ye-pedicure esheshayo
Wedding wena ngokwakho
I-subitaneous mite inja - izimpawu kanye nokwelapha
Ukubhala ngesandla nomlingiswa womuntu
Ukushintshaniswa okukhulelwe kubonakala kanjani?
Inzwa: Abavubukuli baseTurkey bathole ithuna likaNicholas the Wonderworker!
Isitayela saseMpumalanga izingubo
Izinkinga zengqondo Kendall Jenner akuyona ihlaya!
U-Kaitlin Jenner Uphinde Ulwa Nesifo Segciwane Lesikhumba
Ungathatha kanjani i-Ftalazolum?
Apple ukusika izihlahla entwasahlobo - izimiso eziyisisekelo nemithetho yabaqalayo
Ngingahlala isikhathi esingakanani ngiphakamisela izintombazane intombazane?
Indwangu yamaNdiya ngezandla zabo
I-Autumn Collection Shoes 2013
Ibhotela le-cocoa ebusweni
Lesi sithombe sibonisa imibuthano engu-16, kodwa abantu abaningi abababoni!
Izandla ze-Easter enkulisa
I-virus yesifo sofuba - izimpawu